Djibouti: Maxay Dawlada Jabuuti Ka Tidhi Casriyeynta Dekeda Berbera Iyo In Isticmaalka Itoobiya Ay Saamay Ku Yeelan Karto Dekedaheeda? - Wargane News
Home Somali News Djibouti: Maxay Dawlada Jabuuti Ka Tidhi Casriyeynta Dekeda Berbera Iyo In Isticmaalka...
Dawlada Jabuuti ayaa markii u horeysay ka hadashay saamayta ay maalgashiga Dp World ee dekeda magaalada Berbera ku yeelan karto dakedaha Jabuuti,waxaanay Jabuuti sheegtay inay soo dhawaynayso tartan caafimaaad qaba oo dhex mara dekedaha gobolka Geeska Afrika.
Gudoomiyaha maamulka dekedaha Jabuuti Abubakar Cumar Xadi oo u waramaya wargeyska Capital ee kasoo baxa dalka Itoobiya gaar ahaana caasimada Addis-ababa ayaa sheegay in aanu dalkiisu ka walaacayn hadii Itoobiya isticmaasho dekeda magaalada Berbera.
Mr Abubakar oo la waydiiyey saamaynta uu dekeda Djabuuti ku yeelan karo doonista ay Itoobiya ku doonayso inay isticmaasho dekeda magaalada Berbera ayaa sheegay inaanay dawlada Jabuuti iyo guddiga maamulka dekedaha Jabuuti ka warwarsanayn qorshaha ay Itoobiya ku doonayso inay isticmaasho dekeda magaalada Berbera.
“Kama warwarayno sababtoo ah Itoobiya xajmigeedu si dhaqso ah ayuu ukorayaa sanad kasta”ayuu yidhi madaxa dekedaha ee Jabuuti isaga oo intaasina raaciyey :Hadii uu jiro tartan xor iyo xalaal ahi,markaasi maalgashi badan ayaanu samaynaynaa shirkadaha Itoobiyana waxay barbar dhigi karan damacooda meelaha kael”.
Dawlada Jabuuti ayaa u muuqata inay ka gaashaamanayso saamayn kasta oo ay dekeda Berbera ku yeelan karto dekedahooda,iyada oo dawlada Itoobiyana ah dalka ugu balaadhan ee uu dhinac waliba doonayo inuu kalsooni ka kasbado.
Gabagabadiina dawlada Somaliland ayaa dhawaan sheegtay in dekeda magaalada Berbera laga siiyey dawlada Itoobiya saami dhan 19% si loo soo jiido waxyaalaha ay Itoobiya dhoofiso ama lasoo dagto.
Somaliland: Daawo Nuxurka Qubaddii Maayar Soltelco U Ka Jeediyey Xisbiga Kulmiye